အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းအမြစ်များ ရပ်တန့်ပေးပါ။ - News @ M-Media
အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းအမြစ်များ ရပ်တန့်ပေးပါ။
in ဆောင်းပါး — September 11, 2011
လာမည့် တနင်္ဂနွေနေ့ -၂၀၁၁၊ စက်တင်ဘာ ၁၁ ရက် မှာ ကမ္ဘာမှာ လူထောင်နဲ့ချီသေခဲ့ရတဲ့ အမွှာညီနောင်မျှော်စဉ်ရဲ. ၁၀ နှစ်ပြည့်အတွက် အမှတ်ရကြဦးလိမ့်မယ်။ ဒီလို မနှစ်သက်၊ မလိုလားဖွယ် သေကြေ၊တိုက်ခိုက်ခံရမှုကနေ သမ္မတ ဂျော့ဘွတ်ရ်ှနဲ့ အပေါင်းအပါများကို အကြမ်းဖက်မှုတွေအတွက်ဆင်နွှဲစစ်ပွဲ- war on terror လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ စစ်ကို စတင်ပြင်ဆင်ဖို့ ပုံစံတကျစုစည်းမှုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
ပထမ သူတို့ရဲ. စာရင်းအရကတော့ အာဖဂန်ရဲ. တာလီဘန် (အမေရိကန်နဲ့အပေါင်းအပါများ-သူတို့ကိုယ်တိုင် တာလီဘန်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တည်နိုင်ရန်ကူညီခဲ့) တွေကို မောင်းထုတ်ရှင်းဖို့ပါ။ နှစ်ကာလက ၂၀၀၁ ခုနှစ်။ ဒီနောက် သူတို့ အီရတ်ကို ရောက်သွားခဲ့ပြီး ဆဒ္ဒတ်ဟူစိန် (အမေရိကန်နဲ့အပေါင်းအပါများ-သူတို့ပဲ အစောပိုင်းက အာဏာနဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီး အီရန်ကို စစ်ပွဲဆင်ခိုင်းခဲ့) ကို ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းဖို့ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့က ဆဒ္ဒတ်ဟူစိန်ဟာ အဖျက်လက်နတ်ကြီးတွေကို ထုထည်လိုက် ဆောက်တည်နေတယ်ဆိုတဲ့ စွတ်စွဲချက်တင်ခဲ့တာပါ။
ဒါဟာလည်း နောက်ပိုင်းမှာ တကယ့် လိမ်လည်မှုများ ထိပ်ခေါင်အဖြစ် ပြောင်းခဲ့၊ ပေါ်လွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆဒ္ဒတ်ဟူစိန်ဟာ သူ့လူတွေအပေါ်မှာ အနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုများကျူးလွန်ခဲ့မှု၊ အထင်ကြီးဂုဏ်မောက်မှု၊ မတရားအာဏာရူးကာ ကူဝိတ်နိုင်ငံအားနယ်ချဲ.ခဲ့မှုတို့ရှိသော်လည်း သူတို့-အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်နဲ့ အပေါင်းအပါနိုင်ငံများစွတ်စွဲသလို လက်နတ်တွေ ထုတ်လုပ်နိုင်မှုအရည်အချင်း အတိုင်းအတာ လုံးဝမရှိတာ အများသိ ပေါ်လွင်ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ စွတ်စွဲသလို သက်သေမပြနိုင်ပဲ ရန်လိုရဲတင်းစော်ကား သိမ်းပိုက်အနိုင်ရလိုမှုနဲ့သာ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ နှစ်ရှည်လကြာစွာ ဘတ်ဂရတ်မြို.ကြီးဟာ အပိုင်စီးဝင်ဖျက်ခံခဲ့ရတာပါ။ ကတ်ဒ်သူပုန်များအရေး ဦးတည်မထားပဲ ရှီအာနဲ့ စွန္နီ မွတ်စလင်မ် အုပ်စု ၂ ခုကြား သဘောတူညီမှု မရကြတဲ့ ဆူပူထကြွဖျက်ဆီးမှုတွေသာ နောက်ဆက်တွဲ ဆက်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်နေ့မှာ ဘွတ်ရ်ှက သူတို့ စစ်ဆင်ရေးပြီးမြောက်တယ်လို့ ကြေငြာလေရဲ.။ နေ့စဉ် အီရတ်ပြည်သူတွေ များစွာ သေနေကြရတယ်။ အမေရိကန်စစ်သားတွေလည်း သူတို့က စစ်ပွဲပြီးပြီ ကြေငြာနေတဲ့ နေရာတွေမှာပဲ သေဆုံးနေရတယ်။ ဒီ စိတ်ပျက်စရာ၊ ဆိုးရွားလှတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အီရတ်နဲ့အာဖဂန်မှာ ဖြစ်နေစဉ် သူတို့ အမေရိကန်ရဲ. အိမ်တွင်းရှေ.တန်းမျက်နှာများဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်လွှတ်တော်၊ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေ၊ အမေရိကန်ပြည်နယ်ဌာန၊ ရဲ နဲ့ တခြားအစိုးရပတ်သတ်ရာ အဖွဲ့တွေကို အသုံးချပြီး သူ (ဂျော့ဘွတ်ရှ်)က သူ့ရဲ. အကြမ်းဖက်မှုအပေါ်ဆင်နွှဲစစ်အကြောင်း အကျယ်ချဲ.ပြပါတယ်။ သူက လွှတ်တော်မှာ နိုင်ငံရေးနဲ့ နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေကို ကန့်သတ်တဲ့ မျိုးချစ်ဥပဒေ ၁ နဲ့ ၂ ( Patriot Act I & II) ကိုထုတ်ပြန်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ နောက် သူက အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ တရားစီရင်ရေးကိုလည်း တလွဲအသုံးချကာ အခြေခံဥပဒေ မဟုတ်တာကို အခြေခံဥပဒေအဖြစ် ပြောင်းလဲ ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ပါတယ်။
တဖက်မှာလည်း သူတို့ရဲ.အောင်ပွဲလို့ အရေးမဆိုပင်မဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာ ဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၄ မတ်လ ၁ရက်နေ့မှာ စပိန်မှာ ဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်။ ၂၀၀၅ ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့ အင်္ဂလန်မှာ ပျက်စီးထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ စာရင်းထဲ အသေးစိတ်မဖော်ပြထားတာတွေက ပါကစ္စတန်ကို ဗုံးတွေကျဲ၊ ချေမှုန်းနေတာတွေ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ သြစတြေးလျနဲ့ နောက်ဆုံးကတော့ အိန္ဒိယမှာ ပေါက်ကွဲမှုတွေ လောင်ကျွမ်းပျက်စီးမှုတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့ အရပ်သားတွေ သေကြေဒဏ်ရာရကြတာအများကြီးပါ။ လက်တလော နော်ဝေမှာ အပြစ်မဲ့ ကျောင်းသားအရွယ်လူငယ်တွေ သေဆုံးခဲ့ရတာလည်း ထည့်စဉ်းစားကြရပါမယ်။
ဒီဖြစ်ပျက်မှုတွေကြားက ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာကို သင်ခန်းစာအဖြစ်ကောက်ချက်ဆွဲလို့ရမလဲ။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် စောဒကတက်လိုတာက အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရပ်တွေကို သြဇာကြီး အာဏာရှိ နိုင်ငံကြီးတစ်ခု ဦးဆောင်တဲ့ အနိုင်ကျင့်ချိုးနှိမ်မှုတွေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ ကိုလိုနီဆန်စွာ ဝင်ရောက်ကျူးကျော်သိမ်းပိုက် လုယက်ပြီး စီစဉ်မှုသော်လည်းကောင်း၊ ပိုမိုအင်အားကြီးတဲ့ ဖိအားဖြင့် သော်လည်းကောင်း ဘယ်လိုမှ မဖြေရှင်း၊ မရပ်တန့်နိုင်ပါဘူး ဆိုတာပါ။ ဒါကိုလည်း သမိုင်းက သက်သေတည်နေပါတယ်။
အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်နဲ့ အပေါင်းအပါနိုင်ငံများလည်း အကြမ်းဖက် ဆူပူသောင်းကျန်းမှု လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အပြစ်ရှိသူတွေပါ။ သူတို့က တရားမျှတမှုအတွက်ဟု ဘယ်လိုပဲ ကြွေးကြော်သော်ငြား အပြစ်ကျူးလွန်သူတွေနဲ့ လုံးဝမခြားပါ။ အကြမ်းဖက်ဆူပူသောင်းကျန်းမှုတွေပဲဖြစ်စေတဲ့ ပုံစံတူ ကျူးလွန်နေတဲ့ သူတို့ကိုယ်တိုင် အကြမ်းဖက်သမားများ၊ အပြစ်ရှိသူများဖြစ်နေကြပါတယ်။
အမေရိကန်က အကြမ်းဖက်သမားလို့ပြောတဲ့ သူတွေအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးအတွက် မလေးစားပါ။ အဘူဂါရစ်ဗ် အကျဉ်းထောင်တွင်း သူတို့ရဲ. သားရဲတိရစ္ဆာန်ဆန်ဆန်၊ လူမဆန်တဲ့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နည်းမျိုးဖြင့် အပြစ်ပေးခံခဲ့ရတာ လူထောင်နဲ့ချီရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်အမှားအမှန် မဝေခွဲနိုင်ပဲ ပါလာခဲ့တဲ့ ဆဒ္ဒတ်ဟူစိန် သစ္စာခံတွေ၊ အလ်ကေဒါးအဖွဲ.အား အားပေးသူတွေအဖြစ် အများကြီး ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန်က အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ပြောတဲ့ သူတွေအပေါ်မှာ ဥပဒေနဲ့ နိုင်ငံတကာအဆုံးအဖြတ်တွေ အပေါ်မှာ မလေးစားပဲ ပြုမူခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အမှန်ပါ။ သူတို့ အီရတ်ကို စစ်ဆင်နွှဲခဲ့တာက ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီ အလိုနဲ့ ဆန့်ကျင်ပြီး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ။ သူတို့လုပ်ခဲ့တာက ကုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ် ၁၄၄၁ ကို အတိအလင်းချိုးဖောက်ပုံကန်ခဲ့ခြင်းပါ။
ကျွန်တော် ဆက်ပြီး ဆက်ပြီးတင်ပြနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အဓိက ကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ပေးချင်တာက မှားပါတယ် သက်သေမပြနိုင်တဲ့ အမှန်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ထုချေပြဖို့ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးက ဒီအပြစ်ရှိသူ ၁၉ ယောက်လို့ သူတို့ကို အမွှာညီနောင်တိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွက် ရှုံ.ချကြရမယ်။ သူတို့ဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေပါ။
ဒီလိုပဲ ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးက အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်နဲ့ အပေါင်းနိုင်ငံများကိုလည်း သူတို့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ပြီး နိုင်ငံတကာနဲ့ချီပါဝင်စေခဲ့တဲ့အထိ အာဖဂန်၊ အီရတ်၊ ပါကစ္စတန် ပြည်သူတွေရပိုင်ခွင့်ကို ဆန့်ကျင် ကျူးလွန်ခဲ့မှုတွေအတွက် ရှုံ.ချ အပြစ်တင်ရပါမယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင် အကြမ်းဖက်သမားများပါ။
တာလီဘန်နဲ့ အမေရိကန်တပ်သားတွေဟာ တစ်မျိုးတည်းပဲ၊ အတူတူတွေပါ။ သူတို့အချင်းချင်း လူအထင်ကြီးအောင် ပစ်ခတ်ဗုံးကြဲမိုင်းထောင်သတ်ပြနေကြခြင်းမှာ အပြစ်မဲ့ အရပ်သားပြည်သူတွေ ဒုက္ခကြီးစွာ ဝေဒနာမျိုးစုံရရှိခံစားကြပြီး အဆုံးမှာ သေကျေပျက်စီး နိဂုံးမလှဖြစ်ကြရတာသာ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ် ကျန်ခဲ့ရပါတယ်။
ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးက ပါကစ္စတန်လို နိုင်ငံမျိုးကိုလည်း အပြစ်တင်ရှုံ.ချရပါမယ်။ သူတို့က တစ်ချိန်တည်းမှာ စစ်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ် အနောက်နိုင်ငံတွေကို အခွင့်အရေးပေးသလို၊ တာလီဘန်နဲ့ အလ်ကေးဒါးတွေ အတွက်လည်း အခြေစိုက် ခိုလှုံပုန်းအောင်နေစရာဖန်တီးဖို့ အခွင့်အရေးပေးထားတာဟာ သူတို့ရဲ. ကြီးစွာသော အားနည်းချက်အမှားဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ တာလီဘန်၊ အလ်ကေးဒါးနဲ့ ဘယ်လိုနာမည်တပ်တပ်၊ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြပြ၊ နိုင်ငံရေးအရမှန်ပါတယ်ကြေငြာပြီးအလားတူအပြစ်မဲ့အရပ်သားပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်ပြုမူနေတဲ့ အကြမ်းဖက်သမားအားလုံးကို ရှုံ.ချအပြစ်တင်ကြရပါမယ်။
၉/၁၁ စက်တင်ဘာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်ရပ် အမွေအနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးအတွက် သတိရစရာပါ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။(ဘယ်သူတွေကြောင့်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေ အဖြေသိနိုင်ကြပါတယ်) မိုက်မဲခေါင်းမာတဲ့အကြံနဲ့ပြုမူမှုတွေ၊ ဘာသာရေး၊နိုင်ငံရေးအယူသည်းမှုတွေ၊ မုန်းတီးနာကျည်မှုတွေ၊ ခံယူချက်တယူသန်မှုတွေ၊ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်မှုတွေ၊ တခြားယဉ်ကျေးမှုအတွက် ဂရုတစိုက်မရှိမှုတွေနဲ့ ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ.နောက်လိုက်ဖြစ်သူတွေကြောင့် ကမ္ဘာမှာ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေ ဖြစ်ပွားနေရတာပါ။
ကမ္ဘာကြီးက အနောက်နိုင်ငံများအင်အားနဲ့ အကြမ်းဖက်ခြင်းအတွက်ဆင်နွှဲသောစစ်ပွဲများ ဖြစ်ပေါ်မှု (လက္ခံ) ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ထောင်ချောက်မျိုးအောက် နောက် ထပ် မရောက်ဖို့ လုပ်ကြရမယ်။ သူတို့ရဲ. လွတ်မြောက်မှုနဲ့ လွတ်လပ်မှုအယူအဆအမှားတွေကြောင့် ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့ အပျက်အစီးကြီးမျိုး ထပ်မဖြစ်စေဖို့လိုပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးက အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရင်းအမြစ်ကို လေ့လာ၊ ရှာဖွေ၊ ဖယ်ရှားရပ်တည်စေရ ပါမယ်။ ဒါတွေကတော့ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ စီးပွားရေးကျွန်ခံရမှု၊ လျစ်လျူရှုခံရမှု၊ စိတ်ဓါတ်ခံစားတက်ကြွခြင်းမရှိမှု၊ ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒ အယူသီးပြင်းထန်မှု၊ ကိုယ့်ကိုမကြိုက်သူတွေ အန္တရာယ်ပေးလာမှာတွေးကြောက်မှုနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအသာစီးရလိုမှုတွေပေါ့။
တကယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဟာ နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ.အစည်းဝင် လူသားများအဖြစ် ဒီလို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးအရာများ၊ စင်္ကြာဝဌာဆိုင်ရာ ပြဿနာများအရေးကိစ္စ မလုပ်ဆောင်ဘူးဆိုဘူးဆိုပါက ကျွန်တော်တို့ရဲ. အခွင့်အရေးက အကြမ်းဖက်သမားအုပ်စု ၂ မျိုးကြားကို ရွေးချယ်ဖို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (ဒါဟာ နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ မရှိတော့တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။)
ကျွန်တော်တို့အားလုံး အကြမ်းဖက်မှုမျိုးစုံကို လူသားဆန်မှုဖြင့်လည်းကောင်း၊
ဆူပူထကြွ သောင်းကျန်းမှုတွေကို ကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်နိုင်မှုတွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ မုန်းတီးရန်လိုမှုတွေကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်လည်းကောင်း၊
ိဲတိရစ္ဆာန်ဆန်စွာ အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်မှုတွေကို လူသားပီပီ ကိုယ်ချင်းစာနာမှု သနားဂရုဏာ တို့ဖြင့် လည်းကောင်း တော်လှန်ခုခံတိုက်ထုတ်ခြင်းဖြင့် ပြောင်းပြန်လှန်ကြရပါလိမ့်မယ်။
ဒါတွေအတွက် ရွေးချယ်မှုကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်သာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
(အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းအမြစ်များ ရပ်တန့်ပေးပါ။ ကဲ- မိတ်ဆွေ၊ ဘာလုပ်မလဲ။ သင်မှာ အဖြေရှိပါတယ်။)
မှတ်ချက်။ ၉ ရက်၊ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ မလေးရှားနိုင်ငံထုတ် The Sun သတင်းစာ၏ စာမျက်နှာ ၁၆ မှတ်ချက်ခေါင်းစဉ်အားဆီလျော်သလိုမြန်မာပြန်ဆိုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Jose Mario Dolor De Vega စာရေးသူမှာ Nilai University College – Department of Social Science, School of Humanities and Social Science မှ ကထိက တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။
Tags: American, worldmuslim, ဘာသာပြန်